FBC - Keenyaa Biivareej dhugoomsuuf dhaabbata Ingliiz waliin waliigalteen mallatteeffame
Keenyaa Biivareej dhugoomsuuf dhaabbata Ingliiz waliin waliigalteen mallatteeffame
Finfinnee, Fulbaana 30,2010(FBC)- Waarshaalee Keenya Biivareej jalatti hundaa’an dhugoomsuuf dhaabbata Ingliiz Kaappitaal 54 waliin walii galteen hojii mallatteeffame.
Guyyaa har’aa sirni walii galtee mallatteessuu bakka walitti qabaan koree qindoomina abboota qabeenyaa fi mootumaa(PPP) obbo Abbaa Duulaa Gammadaa argamanitti Hoteela Sharaatan Addisitti taasifameera.
Dhaabbanni Ingiliiz kun muuxannoo fi kaappitala ol’aanaa kan qamu yammuu ta’u, “54 capital” jedhama.
Dhaabbanni kun rakkoowwan gurguddaa gama teeknooloojii fi sharafa biyya alaatin walqabatee mudachuu danda’u furuun, waarshaawwan “Keenyaa Biivareej Sheer Kaampaanii” jalatti ijaaraman ni saffisiisa jedhameet amanama.
Warshaalen waldaa aksiyoonicha jalatti ijaaraman yeroo gabaabaa keessati kan eegalaman waan ta’eef, namoonni sheerii bitattan maallaqa isinirraa egamu daftanii kaffaluun filannoo boordii kubbaaniyyichaa dhiyeenyatti geggeeffamu irratti hirmachuuf akka of qopheessitan waamichi dhiyaatera.
Gurgurtaan aksiyoona Waldaa Aksiyoona Keenyaa Biivareej xumuramee kaffaltiin aksiyoonaa raawwatamuusaa hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan ibsaniiru.
Keenyaa Biivareej qaama warraaqsa diinagdee Oromoo keessaa tokko.
Keenyaa Biivareej qonnaan bultoota garbuu oomishaniin hidhata uumuun, oomishaalee dhugaatii alkoolirraa bilisa ta’an, bishaan saamsame, oomishaalee lallaafaa, cuunfaa, warshaa xaarmusii, plaastikaa fi paakeejiingii, damee ispoortii fi bashannanaas of keessaa qaba.
Dhakaan bu'uuraa Keenyaa Shawaa Lixaa Giincitti Caamsaa 2009 kaa'amuun isaa ni yaadatama.
Oduuwwan Biroo « Qaala’iinsi gatii Fulbaanaa % 10.8 ta’uun galmaa’e	Dargaggoota furdisa looniirratti bobba’aniif hidhanni gabaa dhaabbata qeeraa oomisha foonii Eshiyaatti ergu waliin uumameef »